Top 5 Android Software in Download
Content Management on Device Android
OS Android waa nidaamka qalliinka ugu caansan oo inta badan loo isticmaalo mobile waqtiga xaadirka ah ee casriga ah iyo Tablet Kombiyuutaro. Content maamulka ku saabsan qalabka android yahay arrin muhiim ah. Waxa ay tilmaamaysaa maaraynta waxyaabaha kala duwan sida Chine, xogta, music, sawiro, videos, mawduucyada, iwm on qalabka android. Sidaas darteed, waxa uu noqonayaa mid aad u muhiim ah in aad hesho macmiilka software ah oo ku saabsan PC si ay u maareeyaan waxyaabaha ku saabsan qalabka android. Content Tan waxaa kasoo muuqday on 'shanta software android si ay u maareeyaan content u aalad android.' Wondershare MobileGo for Android, MoboRobo, Mobogenie, Manager HTC nidaameed iyo Samsung Kies waa software hufan ugu caansan, loo isticmaalo iyo weyn ku PC si ay u maareeyaan ku jira qalab android.
Hordhaca Top 5 Android Software in Maamul Device Android
Liiska sare ugu fiican 5 software Android oo lacag la'aan ah si ay u soo bixi si ay u maareeyaan qalab android 'in guudmar ku qoran. Si aad u dejisan, kuwaas oo 5 software, guji gal magacyada software ah. (Dhibcaha la soo dhigay sida ay qiyaasta ah ee 10)
Wondershare MobileGo for Android 38.31MB Trial Free, Buy Now $39.95 7.9
MoboRobo 24,61 MB Free 7.9
Mobogenie 20,95 MB Free 7.7
Tababare HTC nidaameed 129,76 MB Free 7
Samsung Kies 39,88 MB Free 7
Kooban sharaxaad A la faa'iidada iyo khasaaraha ka mid ah 5 Android maamulka content software ayaa halkan muujiyey. Iyaga Read iyo dooro mid oo soo bixi software Android.
Wondershare MobileGo waa software Tababaraha content awood badan si ay u maareeyaan waxyaabaha aad casriga ah ee ka shaqeeya Windows PC. Waxaa isku xira dhexeeya telefoonka mobile iyo PC via Wi-Fi ama USB Cable oo ha waxaad kala soo bixi, Upload, celin, gurmad u barnaamijyadooda iyo waxyaabaha warbaahinta, barnaamijyadooda iyo maamulka xiriir, iwm Tani Apps shuqullada leh android app ah macmiilka taleefanka lacag la'aanta ah, Wondershare MobileGo oo lacag la'aan ah karo ilaa xusuusta iyo caawin in ay xirto Chine oo aan loo baahnayn. A qaababka maareynta weyn waxaa bixiya software PC this Wondershare ee.
Ilaaliyaa dib-up ee xogta iyo u celinaynaa ay hal click.
Maareynta waxyaabaha ku Memory Phone iyo kaarka SD si fudud.
Kuweeda files warbaahinta in qaab qalab android ah socon.
Syncs Lugood playlist qalabka android aad.
Maamushaa (ku dar, dejinta, edit, ka saar xiriirada nuqul) liiska xiriirada ka PC.
Abaabusha barnaamijyadooda ku saabsan qalab android iyo waxay ka caawisaa si loo dedejiyo telefoonka.
Wuxuu ka caawiyaa inay u soo guuraan app ku jira in SD Card.
Waxaa la dhisay ee SMS Kaaliyaha Client si ay u maareeyaan fariimaha iyo taleefan oo ka PC.
Furidda in khayraadka online sida YouTube, Play Store, iwm ka click hal.
Kaabta xogta iyo iyaga soo celiyo mid ka mid kaliya click ee dhammaan waxyaabaha warbaahinta.
Wondershare MobileGo ku xidhi kartaa qalab android iyada oo la xidhiidha Cable USB offline.
Waxa kaliya ma ahan maamushaa waxyaabaha warbaahinta laakiin sidoo kale waxay bixisaa muuqaalada fariimaha.
Waxa keliya isticmaalaa Code QR ah in la dhiso xiriir Wi-Fi dhexeeya PC iyo telefoonka.
Wondershare MobileGo for Android Waa lacag la'aan si loogu isticmaalo maxkamad muddo 15 maalmood laakiin aad leedahay si ay ugu bixiyaan nooca buuxda si aad u hesho dhammaan qaababka, waana in yar oo qaali ah.
MoboRobo waa software weyn si ay u maareeyaan waxyaabaha ku saabsan qalab android. Android ka maqan codsiga PC ah in ay gacanta ku user qalabka android ah. Laakiin MoboRobo kacdaa ah ka dheregtaan bannaanayd in maaraynta waxyaabaha warbaahinta on qalabka android. Ilaalinta gurmad iyo soo celiyo ee dhammaan waxyaabaha warbaahinta sida videos, music, barnaamijyadooda la taliyaan ee fariinta, maamulka theme waa qaababka ugu muhiimsan ee MoboRobo. MoboRobo ku xidhi kartaa dhexeeya PC iyo qalab android via Cable USB ama network Wi-Fi markii rujin. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan tahay si loo soo dajiyo darawalka si aad telefoon si ay u sameeyaan furitaanka hore ee MoboRobo oo aad eegi kartaa waafaqsan telefoonka aad ka liiskan .
Oggolaanaysa in aad maamulato dhammaan faylasha on qalabka android aad.
Waxay bixisaa adeegyada uploading, duuban, rakibidda iyo xitaa uninstalling barnaamijyadooda ku saabsan qalab ah android.
Dulucda iyo ringtones heli line cusub oo ay ku soo bixi aallada android aad.
Mid ka mid ah software PC iyo gargaarka weyn ka ah maamul ka kooban.
Wuxuu ka kooban yahay khariidad guud ee qaababka.
Jailbreak ama xidid ma loo baahan yahay.
Waxaa uninstall karaan barnaamijyadooda badan.
Just mid software si ay u helaan oo ay u maareeyaan dhammaan faylasha qalabka android aad.
Mararka qaarkood waxa ay taasi ka Artur xoogaa yar.
Rakibaadda darawalka waa dheer markii ugu horeysay.
Mobogenie waa software waxtar leh in maamuli kartaa waxyaabaha ku saabsan qalab android. Habka ugu sahlan tahay in la dhirtuba oo dhan ka kooban warbaahinta iyo iyaga kala soo bixi lacag la'aan wuxuu noqon karaa suurto gal ah iyada oo macmiilku PC this. Waxaad heli kartaa mid ka mid macmiilka taleefanka si ay u soo bixi ka casriga ah, iyo waxa ay badbaadin kartaa lacag xogta mobile.
Chine Free iyo ciyaaraha soo bixi ururinta weyn iyo dhirtu aan oogin.
Wallpapers New iyo ringtones diyaar u yihiin inay kala soo bixi.
Lacag aad u isticmaalka xogta mobile.
Maareynta liiska xiriirada aad ka PC iyo gacan ku haynta fariimaha.
Kaabta iyo soo celiyo mid ka mid click ammaanka iyo nabadgelyada fiican.
Mid ka mid ah click in nolosha xaqiijistay.
Markasta dambeeyay content updated lacag la'aan ah ee aad taleefan.
Saves lacagta iyadoo la isticmaalayo internet guriga.
Fariimaha iyo xiriirada aad u hesho gacanta ku habboon iyo maamulka.
Too hami iyo tartan aan loo baahnayn la Play Store.
Dhiqlaha ee gaadhsiin update u guuleysteen inay fiiro gaar ah.
4. Maamulaha HTC nidaameed
Tababare HTC nidaameed waa mid ka mid ah software macmiilka PC ugu fiican ee qalabka android HTC in aad u faa'iido badan si ay u maareeyaan waxyaabaha ku saabsan qalab aad. Waxaa aad u helo habka ugu fudud ee nidaamka xogta shakhsiga aad ka iPhone hore. Software Tani waxay maamushaa guryaha u hagaagsan ka fiican yihiin kuwa kale si loo sugo macluumaadkaaga shakhsiyeed.
Wuxuu ka caawiyaa in aad maamusho iyo abaabulo sawirkaaga iyo video ku jira.
Syncs playlists la maktabadda music ka Lugood ama Windows Media Player.
A PC macmiilka si fiican u hagaagsan in xiriirada, jadwalka, iyo xogta Bookmarks web dhexeeya telefoonka iyo PC.
Kaabta iyo soo celinta content warbaahinta yahay inta badan ka sahlan badan ka hor.
Way fududahay in hagaagsan in qalab android aad HTC waxyaabaha iPhone.
Hagaagsan oo dhan xogta gaarka ah si ay PC ama qalab lagu kaydiyo.
Easy in ay sii gurmad ah oo soo celin.
Waxay bixisaa sabab door bidayo in laguugu beddelo iPhone by qalab android HTC.
Mararka qaarkood xiriir daba yaac.
Waxa ay taageertaa kaliya qalabka android HTC.
Mararka qaarkood waxay muujinaysaa craps.
Samsung Kies waa software macmiilka PC diyaar u ah maaraynta waxyaabaha ku saabsan qalabka android Samsung. Software Tani waxay muhiim u yimaado maamulka content sifooyinka qalabka android Samsung oo soo bixi kartaa oo cusbooneysiin ah Samsung updates firmware qalabka iyada oo Samsung Kies.
Ogolaaneysa ka kooban warbaahinta maamul ee Samsung telefoonada gacanta.
Inuu siiyo fursad ay si aad u cusboonaysiiso iyo rakibi updates firmware u qalabka android.
Syncs taariikheed, xiriirada sida macluumaadka gaarka ah ee u dhexeeya Samsung Qalabka telefoonada gacanta iyo Mac.
Syncs waxyaabaha Microsoft Outlook in aad qalab android Samsung.
Ka dhig gurmad u waxyaabaha warbaahinta, goobaha, digniinta, xiriirada iyo xitaa Bookmarks.
Easy in ay maareeyaan waxyaabaha ku Samsung qalab mobile.
Waxaa u hagaagsan karo xogta u dhexeeya Mac ama Microsoft Outlook iyo telefoonka gacanta.
Update firmware ka heli habka ugu fudud sida uu waafaqsan yahay qalab.
Xadidan Qalabka telefoonada gacanta Samsung.
Ma haysan karaa gurmad u DRM ilaaliyo files warbaahinta.
Mararka qaarkood la heli karo xiriir lumiyo oo wajahaya dhibaatooyinka si hagaagsan.
Waxaa laga yaabaa in aad u gaabis ah u shaqeeyaan arrimaha buggy.
Shaxda A inay Is barbar dhig ku Features Key About 5 Android Mobile Software in Download
Tababare HTC nidaameed
Kaabta iyo Soo Celinta Haa Haa Haa Haa Haa, marka laga reebo DRM ilaaliyo warbaahinta
Maamulka Warbaahinta Haa Haa Haa Haa Haa
Nidaameed Guryaha Wanaagsan Good Good Wanaagsan Wanaagsan
Apps / Games rakib / uninstall Haa Haa Haa No No
Xiriirada / Message Management Haa Haa Haa No Haa
Dhignaashada Device All All All Qalab android HTC Qalab Samsung Android
App / Game Store (laftiisa) Haa No Haa No No
Hagaaji firmware No No No No Haa
Sida loo tir-Messages Spam On Your Android oo iPhone
Sida loo baadh, qari oo Block Facebook Messages on Android
Top 10 Free Apps durdurka Android Videos in TV Apple
Wax walba waa in aad ogaato oo ku saabsan Manager Device Android
Top 5 Manager Android Music
Sidee inuu ka soo kabsado Photos ka Motorola Droid
Sidee inuu ka soo kabsado fariimaha qoraalka tirtiraa Phone Samsung Cell
> Resource > Android > Top 5 Android Software in Download